Ny pejy fandokoana Fairy nify dia misintona sy miloko maimaim-poana
Boky fandokoana nify
Kely, indrindra, mahaliana ny zazavavy mihoatra ny tontolon'ny elf. Ary na ny olon-dehibe aza tsy azo odian-tsy hita ny hatsaran'ireny zavaboary angano ireny.
Manana andraikitra manokana eto ny angano nify. Avy amin'ny faritra amerikanina ny angano nify ary mametraka vola madinika volamena ho takalon'ny ankizy mametraka nify ronono be dia be ao ambanin'ny ondana. Amin'ny fampiasana ankehitriny, raha tokony ho vola madinika volamena dia omena fanomezana kely ny ankizy. Avy amin'ny angano nify, mazava ho azy. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny sary hosodoko tsirairay avy:
Fairy nify eo alohan'ny zaza matory
Fairy nify sy nify
Fairy nify miaraka amin'ny nify
Fairy nify kely
Fairy nify miaraka amin'ny kintana
Fairy loko nify - angano nify
Fairy loko nify - fahasalaman'ny nify